စတင်ပြီးနှစ်နှစ်အကြာတွင် BQ Ciclop 3D Scanner ကိုလေ့လာခြင်း အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ
BQ CICLOP 3D Scanner ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
Toni က de Frutos | | ပုံနှိပ် 3D
el en CES ယခုနှစ် 2015 bq တင်ပြခဲ့သည် လူ့အဖွဲ့အစည်း၌သူ၏ 3D scanner bq CICLOP။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းသောအရင်းအမြစ်စီမံကိန်းဖြစ်ပြီးကုမ္ပဏီသည်ထုတ်လုပ်သူအသိုင်းအဝိုင်းတစ်ခုလုံးအားစကင်နာ၏ဖွံ့ဖြိုးမှုအတွက်လိုအပ်သောအလုပ်များကိုမျှဝေပေးသည်။ ထိုနည်းဖြင့်သုံးစွဲသူများသည်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်အကြံဥာဏ်များနှင့်တိုးတက်မှုများကိုပူးပေါင်းနိုင်ကြသည်။
ဤဆောင်းပါး၌ ငါတို့သည်ဤထုတ်ကုန်အသက်ဘယ်လိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသွားကြသည် နှင့်ဤဝိသေသလက္ခဏာများတစ်ခုမော်ဒယ်ဆည်းပူးနေဆဲအသုံးဝင်လျှင်။
1 3D Scanning အတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းပညာ
2 BQ Ciclop 3D Scanner ၏ထူးခြားချက်များ
3 BQ Ciclop 3D စကင်နာကိုထုတ်ယူခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း
5 ပထမ ဦး ဆုံး Scan ဖတ်
3D Scanning အတွက်အသုံးပြုတဲ့နည်းပညာ
Ciclop သည်စကင်နာဖြစ်သည် 3D triangulation ကိုအခြေခံသည် အရာတစ် ဦး ထည့်သွင်း နှစ်ခုလိုင်းများပရောဂျက်လေဆာရောင်ခြည် တစ်လှည့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင်အလှည့်အရာဝတ္ထုပေါ်မှာ။ စကင်ဖတ်စစ်ဆေးထားသောအရာဝတ္ထု၏ပုံသဏ္andာန်နှင့်ပုံစံများကိုကင်မရာတစ်လုံးကဖမ်းယူသည်။
အနက်ရောင်အရာဝတ္ထုကိုလက်ခံတယ် လေဆာရောင်ခြည် ကြောင်း linear ရောင်ပြန်ဟပ်မှုအားဖြင့်လမ်းလွဲနှင့်အာရုံခံကိရိယာကဖမ်းမိ သောရှာဖွေတွေ့ရှိရောင်ခြည်၏အသီးအသီး၏အနေအထားကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရေးဆော့ဖ်ဝဲမှဖြတ်သန်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံသော 3D ပုံရိပ်ကိုဖွဲ့စည်းနိုင်မှကြွင်းသောအရာနှင့်အတူ၎င်း၏ဒေတာဘေ့စထဲမှာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ အရာဝတ္ထုသည်၎င်း၏ပုံသဏ္orာန်သို့မဟုတ်အနေအထားကိုပြောင်းလဲသွားသည်နှင့်အဖြစ်အပျက်အလင်းသည်ထပ်တူထပ်မံထင်ဟပ်တော့မည်မဟုတ်ပါ။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည်ကင်မရာ၏တူညီသောtoရိယာသို့မရောက်ရှိခြင်းကြောင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးရန်အတွက်မော်ဒယ်ပေါ်တွင်အခြားအမှတ်တစ်ခုကိုမှတ်ပုံတင်ထားသည်။ …။
ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်အားလုံးကိုလုပ်ဆောင်ရန် ကင်မရာကတဆင့်၊ စကင်နာရဲ့ရွေးချယ်မှုနဲ့သတ်မှတ်ချက်တွေကိုစီမံပါ။ bq Horus တီထွင်ခဲ့သည်, Multiplatform နှင့်အခမဲ့လျှောက်လွှာ။
BQ Ciclop 3D Scanner ကခွင့်ပြုသည် အကျယ်အားဖြင့် ၂၀၅ မီလီမီတာအချင်း ၂၀၅ မီလီမီတာအထိစစ်ဆေးနိုင်သည် တစ်ဦး resolution ကို 500 microns5မိနစ်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့်အချိန်။
La အီလက်ထရွန်းနစ် စကင်နာ၏တစ် ဦး ၏ရေးစပ်သည် Arduino အခြေစိုက်ဘုတ်အဖွဲ့, Logitech ကင်မရာ၊ linear linear lasers နှင့် stepper motor ။
BQ Ciclop 3D Scanner ၏ထူးခြားချက်များ
အများဆုံး scan အရွယ်: 205mm (အချင်း) x 205mm (အမြင့်) ။
မျက်စိနှင့်အာရုံခံကိရိယာ: Logitech C270 HD 1280 x 960 ကင်မရာ
resolution က: 500 microns
စကင်နာအရွယ်အစား: (x) 450 x (y) 330 x ကို (z) 230 မီလီမီတာ
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်dimရိယာမှိန်: (r) 205 x ကို (ဇ) 205 မီလီမီတာ
စကင်နာအလေးချိန်: ခန့်2ကီလိုဂရမ်
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုတိကျမှု - ၅၀၀ မိုက်ခရွန်
စကင်ဖတ်စစ်ဆေးနှုန်း ခန့် 3-4 မိနစ်
တစ်လှည့်နှုန်းအဆင့်များ: 1600 နှင့် 160 အကြား
ဒီကုန်ပစ္စည်းကိုစတင်မိတ်ဆက်ပြီးနှစ်နှစ်အနည်းငယ်လောက်ကုန်သွားပေမဲ့၊ သင့်တင့်တဲ့ဈေးနှုန်းနဲ့ပစ္စည်းတစ်ခုဝယ်ဖို့ရွေးချယ်စရာတွေကမတိုးဘူး၊ လက်ရှိအိမ်စကင်နာများသည် bq model နှင့်အတူတူပင်အင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူတူပင်ရှိသည်.
BQ Ciclop 3D စကင်နာကိုထုတ်ယူခြင်း၊ တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်တပ်ဆင်ခြင်း
El mounting အရမ်းကောင်းတယ် လွယ်ကူသော နှင့်ထုတ်လုပ်သူအလွန်ကောင်းစွာမှတ်တမ်းတင်ထားသည်။ သင်လက်စွဲကိုလိုက်နာနေသည့်ကျွမ်းကျင်မှုအပေါ်မူတည်သည် မိနစ် ၃၀ နဲ့တစ်နာရီကြားကြာနိုင်တယ် အပြည့်အဝစုဝေးပစ္စည်းကိရိယာများရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်လက်စွဲကိုတလွဲအဓိပ္ပာယ်ကောက်ယူမိခြင်းကြောင့်မည်သည့်အဆင့်တွင်မဆိုတွန့်ဆုတ်ခြင်း (သို့) မည်သည့်အစိတ်အပိုင်းကိုမျှပြန်လည်ပြုပြင်ခြင်းမပြုဘဲမြန်မြန်ဆန်ဆန်ပြီးဆုံးအောင်ပြီးဆုံးပါပြီ။
ထုတ်လုပ်သူက youtube မှာတောင်ဗီဒီယိုတင်ထားတယ် ၃ မိနစ်မျှသာကျွန်ုပ်တို့သည်အပိုင်းပိုင်းအားလုံးကိုမည်သို့ထားသင့်ကြောင်းအသေးစိတ်ပြသသည်။
ကွဲပြားခြားနားသောဘာသာစကားများဖြင့်လက်စွဲစာအုပ်ထုတ်ကုန်နှင့်အတူထောက်ပံ့ပေးကြသည်ဆိုတဲ့အချက်ကိုနေသော်လည်း, သင်ကဖြတ်သန်းသွားရန်အကြံပြုပါသည် ဝဘ်ပေါ်တယ် မင်းရဲ့ထုတ်ကုန်တွေအတွက်ဘာတွေရှိလဲ။။ ထဲမှာ သင်လိုအပ်သမျှကိုထုတ်ဝေသည် သင့်ရဲ့စကင်နာကိုအသုံးပြုရန်။ လက်စွဲများမှနောက်ဆုံးပေါ် Horus ဆော့ဝဲလ်အထိ။
FDM ပရင်တာများမှပုံနှိပ်ထားသောအစိတ်အပိုင်းများရှိသည့်ကုန်ပစ္စည်းများ ၀ ယ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့ကရယ်စရာကောင်းသည်။ စကင်နာအမှု၌, အားလုံးပလပ်စတစ်အစိတ်အပိုင်းများကို PLA ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခဲ့ကြသည်။ ၎င်းသည်ရှုပ်ထွေးပြီးကုမ္ပဏီငယ်တစ်ခုသည်ဤအလေ့အကျင့်ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်သော်လည်း၎င်းသည်ဆေးထိုးခြင်းမှိုလုပ်ခြင်းထက် bq ကဲ့သို့သောကုမ္ပဏီအတွက် ပို၍ အကျိုးရှိနိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ထင်မြင်ရန်ခက်ခဲသည်။ သို့သော်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့စစ်ဆေးနိုင်သည် ဤအအစိတ်အပိုင်းများ၏ပုံနှိပ်အရည်အသွေးအလွန်အစွမ်းထက်တဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
စကင်နာ၏မှန်ကန်သောစစ်ဆင်ရေးသည် သင် Horus ဆော့ဝဲလ်နှင့် Logitech ဝက်ဘ်ကင်မရာဒရိုင်ဘာများကိုတပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည် ၎င်းကိုစနစ်နှင့်ပေါင်းစပ်ပြီးထုတ်လုပ်သူရဲ့ ၀ က်ဘ်ပေါ်တယ်တွင်တွေ့နိုင်သည်
ပထမ ဦး ဆုံး boot လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုစစ်ဆေးသည် software သည် arduino ဘုတ်၏ firmware ကိုအဆင့်မြှင့်ရန်တာဝန်ရှိသည် ဘယ်ပါဝင်သည်။ ငါတို့ကိုယ်ပိုင်စကင်နာကိုလုပ်ပြီးလျှင် ငါတို့မဆို arduino ဘုတ်အဖွဲ့ကိုသုံးနိုင်သည် ထုတ်လုပ်သူကအသေးစိတ်သတ်မှတ်ချက်များနှင့်ကိုက်ညီ။ bq ၏ကောင်းသောအလုပ်၏တစ် ဦး ကအလွန်အရေးပါသောအသေးစိတ်။
ငါတို့မှာရှိတဲ့အရာအားလုံးဟာ PC နဲ့ချိတ်ဆက်ထားတာတွေရှိတယ်။ ဆော့ဖ်ဝဲကို install လုပ်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပထမဆုံးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့အချိန်ဖြစ်တယ်။
ပထမဆုံးကြုံတွေ့ရသောပြproblemနာမှာကွန်ပျူတာ horus နှင့်မတူညီသော webcam များထားရှိခြင်းအားဖြင့်မည်သူ့ကိုအသုံးပြုရမည်ကိုနှင့် software သည်၎င်းတွေ့ရှိသော webcams ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းမပြနိုင်ခြင်းပင်ဖြစ်သည်။ ကြိုးပမ်းမှုတစ်ခုအနေဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်မှန်ကန်သောဝက်ဘ်ကင်မရာကိုတွေ့ရှိခဲ့ပြီး၊
ကျွန်ုပ်တို့သည်လေဆာရောင်ခြည်နှစ်ခုလုံးသို့မဟုတ်တစ်ခုတည်းအသုံးပြုခြင်းဖြင့်မျက်နှာပြင်များကိုသာစကင်ဖတ်စစ်ဆေးနိုင်သည်သို့မဟုတ်အရောင်များကိုဖမ်းယူနိုင်သည်။ ပြီးတော့အဲဒီမှာ ကျနော်တို့ညှိနိုင်သည်ကိုအဆုံးမဲ့ရွေးချယ်စရာ ကျွန်ုပ်တို့စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်ပတ်ဝန်းကျင်၏ဝိသေသလက္ခဏာများကိုစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုကိုပိုကောင်းအောင်ပြုလုပ်ရန်။
ပထမ ဦး ဆုံး Scan ဖတ်
ကျွန်ုပ်တို့၏ပထမဆုံးစကင်ဖတ်စစ်ဆေးမှုသည်လုံးဝကျိုးကြောင်းဆီလျော်သောသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စူးစမ်းလေ့လာမှုပြုရန်စဉ်းစားစရာမလိုဘဲစတင်ခဲ့သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ဖိုရမ်များသို့အလည်အပတ်ခရီးစဉ်က၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့အားသင်ပေးသည် လေဆာတြိဂံပုံသဏ္sensitiveာန်သည်အလွန်အထိခိုက်မခံသောကြောင့်လေဆာရောင်ခြည် ၂ ခုဆုံသည့်နေရာသည် Turntable ၏အလယ်ဗဟိုတွင်အပြည့်အ ၀ ကိုက်ညီမှုရှိသည်ကိုတွေ့ရသည်။။ သို့သော် BQ သည်စင်မြင့်ပေါ်ရှိအမှတ်အသားကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောအရာတစ်ခုကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ စတုရန်း၊ သံလိုက်အိမ်မြှောင်၊ စက္ကူ၊ လေဆာရောင်ခြည်ချိန်ညှိပြီးသည်နှင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသောအရာဝတ္ထုများ၏အရည်အသွေးသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာသည်။
အရာဝတ္ထုတစ်ခုကို scan ဖတ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့သည် .ply format နှင့်သိမ်းနိုင်သည်။ ရိုးရိုး format ကို .stl ဖြစ်သောကြောင့်မည်သည့်ပရင်တာတွင်မဆိုသုံးနိုင်သည်။ ထုတ်လုပ်သူ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်သို့နောက်ထပ်လည်ပတ်မှုက၎င်းကိုရှင်းလင်းစေသည် horus ဆော့ဖ်ဝဲသည်ဤပုံစံကိုရရှိရန် .stl ဖိုင်များကိုထုတ်လုပ်သည်မဟုတ်ပါ၊ အခြား open source program ကိုကျွန်ုပ်တို့အသုံးပြုရမည်။
တပ်မက်လိုချင်သောရလဒ်ရရှိရန်ဒုတိယဆော့ဝဲလ်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စကင်နာကိုအသုံးပြုမှုနည်းပါးစေသည်။ သို့သော် bq သည်လုပ်ငန်းပြီးမြောက်ရန်လိုအပ်သည့်အဆင့်အားလုံးကိုမှတ်တမ်းတင်ထားသည်.
ပုံတွင် Scan လုပ်ထားသောပုံစံနှင့်ရရှိသော 3D ပုံကိုတွေ့နိုင်သည်
ဆောင်ရွက်ပြီးစီးသည့်စစ်ဆေးမှုများကိုကြည့်။ ကျွန်ုပ်တို့အတည်ပြုနိုင်သည် ရလဒ်များကိုကြီးမားတဲ့အရေအတွက်ပေါ်မူတည်။ အလွန်ကွဲပြားခြားနားပါလိမ့်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့စကင်နာရှိသည့်ofရိယာ၏အလင်းရောင်၊ ကျွန်ုပ်တို့လုပ်ဆောင်ခဲ့သောစံကိုက်ညှိခြင်းတိကျမှုသို့မဟုတ်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးသည့်အရာဝတ္ထုများပါ ၀ င်သောအရောင်များမှကြည့်ခြင်း။
ထုတ်လုပ်သူမှအကြံပြုသောတိုးတက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည် ကွဲပြားခြားနားသောထောင့်မှာအရာဝတ္ထုအကြိမ်ပေါင်းများစွာ scan ဒါကြောင့်အစက်ကွက်ထဲမှာလေဆာရောင်ခြည်ကနေအလင်းမရောက်ရှိနိုင်အနည်းဆုံးareasရိယာများရှိနိုင်အောင်။
ဒီပစ္စည်းကိရိယာများ2နှစ်စျေးကွက်အပေါ်ခဲ့ပြီးပေမယ့် ၎င်းသည်ထုတ်လုပ်သူ၏ကိုယ်ပိုင်ဝက်ဘ်ဆိုက်ပေါ်တွင်မရပါ, ငါတို့နေဆဲတစ် ဦး အဘို့အခြားထူထောင်မှုထဲမှာရှာတွေ့နိုင်ပါသည် € 250 ၏ခန့်မှန်းစျေးနှုန်း.
3D ပုံသဏ္scာန်စစ်ဆေးခြင်းသည်ရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်ပြီးယူရေနီယံထောင်ပေါင်းများစွာကုန်ကျမည့်မရေမတွက်နိုင်သောနည်းစနစ်များနှင့်ကိရိယာများကိုတီထွင်ခဲ့သည်။ ကျနော်တို့ယူဆရန်ရှိသည် ကန့်သတ် ငါတို့ဘာရှိတော့မလဲ မည်သည့်အိမ်သုံးပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်အတူ.
ဒီအဖွဲ့မှာရှိတယ် အလွန်အစွမ်းထက်တဲ့အရည်အသွေး / စျေးနှုန်းအချိုးအစား နှင့်2နှစ်စျေးကွက်အပေါ်တင်ဆက်ပြီးနောက် ဒါကခေတ်နောက်ကျနေပြီမဟုတ်။ ထုတ်လုပ်သူမှပေးသောနည်းလမ်းများသည်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုတတ်နိုင်သမျှလွယ်ကူချောမွေ့စေသည်။
ဒါဟာသင့်လျော်သောထုတ်ကုန်ဖြစ်ပါတယ် ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်မှပြီးပြည့်စုံသောရလဒ်များကိုမျှော်လင့်ထားကြပါဘူးဖန်တီးမှုလုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးပျော်မွေ့တဲ့သူ 3D ပုံနှိပ်ခြင်းကိုနှစ်သက်သောထုတ်လုပ်သူများအတွက်.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - အခမဲ့ဟာ့ဒ်ဝဲ » ပုံနှိပ် 3D » BQ CICLOP 3D Scanner ကိုကျွန်ုပ်တို့ဆန်းစစ်ပါသည်
စိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့သူငယ်ချင်း။ ငါစျေးကွက်ထဲရှိရှိပြီးသား 3D စကင်နာများကိုလေ့လာနေသည်။ ကုမ္ပဏီ BQ နှင့်ပါတ်သက်သောသတင်းအချက်အလက်အချို့ကိုကျွန်ုပ်အားပြောပြနိုင်ပါစေ။
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းပါ၊ ကျွန်ုပ်တွင်စကင်နာရှိသော်လည်း horus 3d ဆော့ဖ်ဝဲလ်ကိုမရပါ၊ ၎င်းသည် github တွင်ပင်မရရှိနိုင်သောကြောင့်၎င်းသည်ငါ့ကိုကူညီလိမ့်မည်။
Sculpteo ကသူ၏ 3D ပုံနှိပ်စက်ဘီးကိုပြသည်